အဖွဲ့များနှင့်ဂီတသမားများအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် SEO Martech Zone
တေးဂီတတွင်ကျွန်ုပ်၏အရသာကိုအနည်းငယ်စိတ်ဆိုးနေနိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဒေသခံတီးဝိုင်းကိုအထူးသဖြင့်နှစ်သက်သည် သေလွန်သူများနှင့်ပူးပေါင်းပါ ဒီမှာ Indianapolis ၌တည်၏။ နှစ်တွေတစ်လျှောက်မှာကျွန်တော်ဟာ live, ထင်ရှားတဲ့နဲ့ local band တွေကိုပိုပြီးနှစ်သက်လာခဲ့တယ်။ ငါတီးဝိုင်းနှင့်အတူဘီယာရှိခြင်းကိုချစ်၏။ ဒေသခံဂီတအတွေ့အကြုံကိုဒေသခံအားကစားကွင်းသို့မဟုတ်ပွဲကြည့်စင်များတွင်တွေ့ရခဲသောအချို့သောတီးဝိုင်းများထက်များစွာပိုနှစ်သက်သည်။
ရိုးရိုးသားသားပြောရလျှင်ကြီးမားသောအဖွဲ့များနှင့်တေးဂီတကြယ်ပွင့်များစွာတို့သည်သူတို့၏လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အပေါ်သို့ကျဆင်းသွားခြင်းအကြောင်းကိုအော်ဟစ်နေစဉ်ငါအွန်လိုင်းမီဒီယာသည်ဂီတလုပ်ငန်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြောင်းလဲပေးသည်ဟုငါယုံကြည်သည်။ ကြားရမည့်ဂီတသို့မဟုတ်ကြယ်ပွင့်ဖြစ်လာမည့်နောက်တီးဝိုင်းတီးဝိုင်းကိုရွေးချယ်မည့်အစားသူရဲကောင်းအနည်းငယ်သာအစား၊ ယခုကျွန်ုပ်တို့ဂီတဝယ်ယူသူများကသူတို့ကြားလိုသည့်အရာကိုဆုံးဖြတ်ရန်ရှိသည်။ အထူးသဖြင့်အွန်လိုင်းပေါ်မှာသူတို့စျေးကွက်ကိုကောင်းကောင်း ၀ င်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့မသိသေးတဲ့တီးဝိုင်းဟာအခုတော့အရင်ကထက်ကြားဖူးကြမှာသေချာတယ်။
သင်၏ ၀ က်ဘ်ပေါ်တွင်ဂီတပါ ၀ င်မှုသေချာစေရန် Facebook ၌သင်၏ Youtube channel သို့ link တစ်ခုတင်ခြင်းထက်အနည်းငယ်ပိုပါ ၀ င်သည်။ သင့်တွင်ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ ခေါင်းစဉ် tag များနှင့် meta ဖော်ပြချက်၊ garage band မှ viral sensation သို့သွားရန်သင်၏ဂီတသမားများအတွက် SEO လမ်းညွှန်ကိုဤတွင်တွေ့နိုင်သည်။ Kristen Geil, ဒီဂျစ်တယ်တတိယကမ်းခြေ.
ဒီတော့အဲဒီမှာသင့်မှာရှိတယ်၊ ကြီးစွာသောအရင်းအမြစ်တွေကိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့ကြီးမားတဲ့အချက်အလက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေ။ ငါသည်လည်းပရိသတ်တစ် ဦး ပါ ပန်းချီဆရာ သင့်ရဲ့လာမည့် Gig မှတ်ပုံတင်ရန်နှင့်ရှေးရှေးနောက်ကိုလိုက်နှင့်သင်အပေါ်မျှဝေဖို့ရှိသည်! အပေါ်ကျောက်!
Tags: ရက်ရာဇာခညျြအနှောတကယဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသေလွန်သူများနှင့်ပူးပေါင်းပါဂီတသမားရော့ခ်ခညျြအနှောseoSoundCloudမင်းyoutube က
အဘယ်ကြောင့် Magento အဆိုပါ Ecommerce CMS စက်မှုလုပ်ငန်း ဦး ဆောင်လမ်းပြရန်ဆက်လက်
သင်၏ Instagram စျေးကွက်ကိုမြှင့်တင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။
ဇန်နဝါရီ 20, 2015 မှာ 3: 39 AM
ဇန်နဝါရီ 22, 2015 မှာ 1: 12 AM
ဇန်နဝါရီ 27, 2015 မှာ 7: 05 AM
ဂရိတ် & အချိန်မီဆောင်းပါးဒေါက်ဂလပ်။ ဂီတပညာရှင်များ (နှင့် podcasters များ) ကိုနားထောင်သူအသစ်များကိုပစ်မှတ်ထားရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သောတွစ်တာအသံကဒ်များနှင့်ကစားနေသည်။